Chikamu chekumaka - OUZHAN DZAISHANDISWA (SHANGHAI) CO., LTD
Chikamu chekumaka inzira inodhura yekuwedzera marogo kana tsika kunyorera kune ako magadzirirwo uye inowanzo shandiswa kune yakasarudzika chikamu tagging panguva yakazara-chiyero kugadzirwa.
● Nyorera kumagetsi emagetsi, maseketi akabatanidzwa (IC), zvishandiso zvemagetsi, nharembozha, zvigadzirwa zvehardware, zvishandiso zvemidziyo, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, magirazi nemawachi, zvishongo, zvikamu zvemota, mabhatani epurasitiki, zvekuvakisa, mapaipi ePVC, zvekurapa nezvimwe maindasitiri. .
● Zvishandiso zvinoshanda zvinosanganisira: zvakajairika simbi uye maalloys (iron, mhangura, aluminium, magnesium, zinc nedzimwe simbi), simbi dzisingawanzo uye alloys (goridhe, sirivheri, titanium), oxides esimbi (ese marudzi ese esimbi oxides anogamuchirwa), yakakosha Surface kurapwa (phosphating, aluminium anodization, electroplating pamusoro), ABS zvinhu (magetsi emagetsi edzimba, zvinodiwa zvezuva nezuva), inki (makiyi akajeka, zvigadzirwa zvakadhindwa), epoxy resin (yemagetsi chikamu kurongedza, kuputira dura).
Chigadzirwa chekumaka chinosanganisira laser yekumaka uye cnc yekuveza.
● Laser yekumaka inzira yekumaka iyo inoshandisa yakakwira-simba density laser kuti imo iririze iyo yekushandira kuti ifukidze iyo yepamusoro zvinhu kana kuburitsa makemikari maitiro ekuchinja kweruvara, nokudaro ichisiya zvachose chiratidzo.
● Nheyo yekumaka laser ndeyekuti yakasimba-simba inoenderera laser danda inogadzirwa ne laser jenareta, uye yakatarisana laser inoshanda pane yekudhinda zvinhu kuti inyungudise ipapo ipapo kana kutopisa iyo yepamusoro zvinhu. Nekudzora nzira ye laser iri pamusoro pechinhu, Fomu inodiwa graphic mamaki.
● Laser yekumaka inoratidzirwa nekusa-bata kugadzirisa, uko kunogona kuiswa pane chero yakasarudzika-yakaumbwa pamusoro, uye iyo workpiece haizove yakaremara uye inounza zvemukati kushushikana. Iyo yakakodzera yekumaka simbi, plastiki, girazi, zvedongo, huni, dehwe uye zvimwe zvinhu.
● Laser inogona kumaka angangoita ese mativi (senge mapistoni, mhete dzepiston, mavharuvhu, zvigaro zvevhavha, maturusi ehurdware, nhumbi dzehutsanana, zvemagetsi, nezvimwewo), uye mamaki acho haashande, maitiro ekugadzira ari nyore kuita, uye zvikamu zvakatarwa zvine zvishoma kushanduka.
● Inokodzera kucheka, kuveza kwemaviri-mativi uye matatu-eatatu kuvezwa kwakasiyana siyana zvigadzirwa. Uye zvakare, iwo akakosha mashandiro uye zvakanakira iyo yakawanda-inoshanda simbi plaque yekuveza muchina: ine simba, yakawanda-chinangwa, kunyangwe iri yekugadzira yendarira, simbi isina simbi, titanium, aluminium uye imwe simbi yekumusoro kunyorera, engraat maitiro uye akanaka emifananidzo graphic mhizha. , Itai kuti zviitwe. Nekuda kwekutema kune simba uye kuita basa kwemuchina uyu, iyo workpiece inogona kugadziriswa kubva kumahombe-fomati zviratidzo kune zvidiki zvipfuva uye zvipfeko zvemazita.
● CNC yekuveza ndeye mubatanidzwa wekuboora uye wekugaya maererano neshoko rekugadzirisa. Sarudzo chaiyo yezvinhu zvekuveza zveCCC uye kushandiswa zvine musoro kwetekinoroji kunogona kuve purojekiti ine yakakwira kudzoka pane inivhesitimendi. Sezvo CNC zvinhu zvekutemera zvinozivikanwa nemaitiro akaomarara, maumbirwo akasarudzika, uye zvigadzirwa zvakagadzirwa zvakapfava, nepo michina yekuveza yeCCC iri kunyanya akareruka masisitimu ehuremu, izvi zvinotadzisa mashandiro eCCC achiita se: "kukuya nekukurumidza neturusi tudiki". Muchokwadi, izvi zvakare Ndo "hunyanzvi hwehunyanzvi" hweCNC yekuveza, uye chikonzero ndechekuti CNC yekuveza iri kuita "bhizinesi risingakwanise kugadziriswa neakajairwa makuru maturusi". Nekuda kweakasarudzika ehunyanzvi zvakanakira CNC yekuveza, GNC yekuveza inonyanya kubatsira mune anotevera maindasitiri: chakuvhe achiita zvekutemera indasitiri uye kushambadzira kunyora indasitiri.